Iqabunga le-Bay elinesifo sikashukela mellitus 1 no-2 > Ukwelashwa nokuvimbela
Iqabunga le-Bay elinesifo sikashukela mellitus 2: Izici zokupholisa ze-infusions kanye nama-decoctions
EGrisi yasendulo, i-laurel yayibhekwa njengesitshalo esingcwele, emagatsheni ayo ifake ugqinsi lomuntu onqobayo, onqobayo. Kulezi zinsuku, kuyisinongo esiphunga saso esimnandi, ngenxa yokuba khona kwamafutha amaningi abalulekile, sikwenza kube isithokelo esijwayelekile ekuphekeni: ukupheka okokuqala, izitsha zenyama, izitsha eziseceleni. Ezindlela zokupheka zomuthi ohlukile, kubekwe njengommeleli ophulukisa ama-pathologies ahlukahlukene, okwandisa isifiso sokudla, kudambisa izinhlungu. Isifo sikashukela sikhula lapho ijusi le-pancreatic linganele kwi-enzyme ye-insulin. Unikezwe indima yemoto yokuletha izicubu ze-glucose kumaseli, abanikeze amandla, ngaphandle kwalokho iyaqongelela, ilimaze izitho zomuntu. Ingabe iqabunga le-bay lisiza abanesifo sikashukela futhi sikuthinta kanjani ukwakheka kwama-hormone?
Izinzuzo nezakhiwo zokwelapha zeqabunga le-bay in sikashukela
I-bay iqukethe omningi obalulekile, onamafutha, ama-resin, ama-tannins, umunyu, umunyu, ama-organic acid, iqukethe amavithamini A, B2, B6, B9, C, izakhi ezilandelwayo: i-calcium, ithusi, i-iron, i-manganese, i-zinc. Kusukela ngeNkathi Ephakathi, izici zokwelapha zesitshalo zazaziwa. Kwakusetshenziselwa ukumisa ukubanjwa kwezifo ngesikhathi sokubeletha, bagcoba umzimba ngokukhubazeka, babesetshenziselwa ukukhwehlela, umkhuhlane, i-neuralgia, izinhlungu zokuqaqamba kwamalunga, ukulimala, amanxeba okuphola. Ngenxa yezakhi zayo ezinhle zokubulala amagciwane, umkhiqizo olungiselelwe usize ngokugcotshwa kwezindawo ezinambuzane ziluma, njengokuvimbela umalaleveva, ikholera, futhi usabhekwa njengosebenza ekulweni nokuvuvukala, amagciwane kanye namagciwane. Ukuhlwanyelwa kutholakala emithanjeni yomkhuhlane, i-tonsillitis, ukutheleleka ngegciwane, ukuvuvukala komgogodla womlomo, izifo zesikhumba, amalunga, izicubu, ubuthi bokudla. Esikhathini sikashukela, kubalulekile ngoba kwehlisa ijubane lokudla okunotha okunama-carbohydrate, kuvumele ukusebenza kwamaphaphu akhiqiza i-insulin, futhi kuqinise ukungatheleleki, okubaluleke kakhulu ngoba lesi sifo siyingozi ngezinkinga eziningi.
Ungawukhulisa kanjani amaqabunga e-bay kushukela?
Ukulungiselela potions, eminye imithombo incoma ukuthatha amaqabunga aluhlaza kuphela, ngoba omisiwe balahlekelwa yizinto eziningi zokuphulukisa, abanye baqinisekisa ukusebenza zombili. Akunzima nhlobo ukukhulisa isitshalo efasiteleni futhi sibe nokutsha unyaka wonke. Kunezindlela ezahlukahlukene zokwakha iqabunga le-bay ngesifo sikashukela, Nazi ezinye:
i-decoction yamaqabunga e-bay - izingcezu eziyi-10 zehliselwa esitsheni samanzi (250-300 ml), ngemuva kokubilisa imizuzu emihlanu, basaqhubeka nokugcizelela elinye ihora noma amabili. Enye inketho - uketshezi olusuka emlilweni lubekwe ku-thermos, ngemuva kwamahora angama-4-5 ungaphuza,
ukumiswa kweqabunga le-bay - ngoba amaqabunga ayi-15 ama-300 ml wamanzi afudumele abilisiwe akwanele, kuzothatha isikhathi eside ukumiliselwa (amahora we-12-14), kufanelekile ukwenza lokhu ebusuku,
i-tincture yeqabunga le-bay - iqabunga lichobozekile (ungalihlephula nje), libekwe phansi komsele futhi ligcwele i-vodka. Isilinganiso sezakhi kufanele kube yi-1: 5. Ngemuva kwalokho izitsha zivaliwe ngokuqinile, zifakwe kwikhabethe isonto lonke, zihlungiwe ngaphambi kokusetshenziswa.
Ungayithatha kanjani i-bay leaf yesifo sikashukela sohlobo lwe-1 no-2, izeluleko
Izeluleko zokwelapha isifo sikashukela ngeqabunga le-bay zifaka lokhu okulandelayo: uma imitha ikhombisa kufika ku-10 mmol / l, khona-ke inkomishi yekota (enkulu i-100 g) yomkhiqizo olungiselelwe yanele izikhathi ezingama-2-3 phakathi nosuku, ilindele isidlo esikhulu esiyingxenye yesigamu sehora. Amanani we-glucose ngaphezulu kwalolu phawu akhombisa ukukhuphuka komthamo owodwa kuya ku-200 ml. Okuphoqelekile inqubo yokuqapha ushukela njalo, uma kunesidingo, ivolumu iyaguqulwa. Inkambo yokwelashwa ihlala kuze kube izinyanga ezintathu, bese kwenziwa ikhefu lokuthatha inyanga yonke. I-tincture yotshwala isetshenziswa kuphela ngemuva kokubonana nodokotela, ngoba Kungathinta kakhulu izinkomba ze-glucose futhi kuholele ngisho naku-hypoglycemic coma. Ukuphuza okungakanani kuya ngethonya lomuntu ngamunye (ngokwesilinganiso sezipuni ezi-1 ngasikhathi sinye).
Iqabunga le-Bay alinangozi njengoba kubonakala ekuqaleni kokuqala. Uyakwazi ukulimaza ngegazi elibi lokuhlangana, labo abahlushwa ukuqunjelwa. Akathandeki ukukhulelwa, ngoba kungadala ukungasebenzi kwemisipha futhi kungaholela ekuphuthweni yisisu. I-Peptic ulcer, isifo sikashukela esinamandla sizobuye sibe yisithiyo ekusetshenzisweni kwaso. I-tincture yotshwala ihlukaniswe ngotshwala.
Izinzuzo zeqabunga le-bay kushukela kanye nezinye izifo
Inani eliyinhloko leqabunga le-bay ukunuka kwalo elimnandi. Umkhiqizo uqukethe inani elikhulu lamafutha abalulekile. Ukunambitheka kwamaqabunga amasha e-bay akuhlaba umunyu, ngenxa yalesi sizathu ukupheka kwayo okude kwinqubo yokupheka akunconywa.
Lokhu kungonakalisa ukunambitheka kwesitsha esizayo. Imizuzu engama-5 ukuya kwengama-10 ngaphambi kokuphela kokulungela - lesi isikhathi esinconyelwe lapho udinga ukulahla iqabunga le-bay.
Ngenxa yokuba khona kweqabunga le-bay lama-tannins, uwoyela obalulekile nolaka, isetshenziswa kabanzi ekwelapheni izifo zesibindi, ipheshana esiswini, ukwenza ngcono ukugaya nokukhulisa isifiso sokudla. Iqabunga le-Bay lithandwa njenge-diuretic ezifweni zamajoyini kanye nohlelo lwezitho zofuzo kanye nohlobo 2 lwesifo sikashukela.
Umkhiqizo uthathwa njenge-antiseptic yemvelo, yingakho wawusetshenziselwa ukubulala amagciwane izandla ngaphambi kokudla. Ngenxa yempahla yokubulala amagciwane yeqabunga le-bay, okokusebenza kwalo kanye nezinqumo zisetshenziswa njengesijobelelo sezilonda zesikhumba sokukhunta, i-stomatitis, i-psoriasis, izifo zamehlo ezivuthayo, ukuvimbela isifo sofuba.
Ngosizo lwamalungiselelo eqabunga le-bay, ungangezela ukungatheleleki komzimba okuphelele nesifo sikashukela sohlobo 2.
Ngalezi zinhloso nezinye, kubuye kusetshenziswe uwoyela obalulekile we-laurel, ukugcotshwa kwawo kuphakeme kakhulu kunokwe-infusion noma i-decoction ejwayelekile. Imvamisa, uwoyela obalulekile usetshenziselwa ukufudumeza ama-compress nokuhlikihla nge:
ukulimala nezifo zamalunga,
Ezimpawu zokuqala zesifo sikashukela sohlobo 2, kusetshenziswa i-decoction yamaqabunga e-bay ukuvamisa ushukela wegazi. Kuhamba njengesihibe kanye nomuthi wendabuko.
Ukuba khona kwezinto ze-galenic egqabini le-bay kuthanda ukuncipha kwenani likashukela egazini ngohlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela; kulokho okuyinkimbinkimbi, amaphilisi angasetshenziswa ukwehlisa ushukela wegazi.
Ngaphezu kwalokho, iqabunga le-bay lingasetshenziswa njenge-prophylactic emelana nesifo sikashukela sokubekezelela ushukela olubi. UStevia, obambela ushukela wemvelo, unomphumela ofanayo.
Imithetho yokukhetha nokugcina amaqabunga e-bay
Lapho omile, iqabunga le-bay ligcina kahle zonke izinto zalo zokuphulukisa, yingakho lisetshenziswa kangcono.
Noma kunjalo, kuphela ngonyaka owodwa izakhiwo eziwusizo zeqabunga le-bay omile ziyagcinwa, ngemuva kwalesi sikhathi, iqabunga lithola i-aftertaste ebabayo ebabayo. Lokhu kuzodingeka ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2.
Labo abanethuba lokuthenga nokuletha iqabunga le-bay kusuka ezindaweni zokukhula kwalo ngqo akufanele balahle ithuba. Ezimakethe zedolobha lezindawo zokuhlala, ungathenga iqabunga futhi elisha, bese uzomisa ngokwakho.
Uma lokhu kungenzeki, khona-ke ngesikhathi sokutholwa kweqabunga le-bay, kufanele unake usuku lokufaka nelokuphelelwa isikhathi. Isitolo se-bay sishiya kangcono embizeni yengilazi ene-lid. Impilo yeshelf ingunyaka o-1.
Ngubani ophucwe ukusetshenziswa kweqabunga le-bay
Naphezu kwazo zonke izimfanelo zayo zokuphilisa, iqabunga le-bay aliphephile kangako. Ukuyiphuza ngamanani amakhulu kungaba nomphumela onobuthi emzimbeni.
Kwabesifazane abakhulelwe, umkhiqizo uvame ukwephulwa, ngoba kubangela ukuqothuka okukhulu kwesibeletho futhi kungavusa ukuphuphuma kwesisu noma ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi. Awukwazi ukudla iqabunga le-bay kanye nabomhlengikazi.
Ezinye izimpawu lapho iqabunga le-bay kufanele liphathwe ngokunakekelwa okukhulu:
izifo zohlelo lokuthinta kwenhliziyo,
ukumelana kwegazi okungekuhle.
Ukwelapha ngokuphelele isifo sikashukela i-mellitus ngeqabunga le-bay, kusobala, akunakwenzeka.
Usebenzisa i-Bay Leaf yesifo sikashukela sohlobo II
Ngezansi kunezindlela zokupheka, nemithetho ongalapha ngayo ushukela ngeqabunga le-bay, okungenani njengoba wehlise ushukela wegazi ngemithi yabantu, iqabunga le-bay selizibonakalisile. Kepha njengendwangu eluhlaza yokumiliselwa, udinga ukukhetha amaqabunga aphezulu.
Ukulungiselela ukumnika, uzodinga amaqabunga ayi-10.
Kumele athululwe ngezingilazi ezintathu zamanzi abilayo.
Amaqabunga kufanele afakwe amahora ama-2-3, kuyilapho isitsha sidinga ukusongelwa ngendwangu eminyene.
Thatha ukumnika nsuku zonke 100 ml isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Imfuneko yokusetshenziswa kwayo ukuqapha ushukela wegazi njalo. Uma kunesidingo, yehlisa umthamo wezidakamizwa ze-insulin nezokwehlisa ushukela.
Iqabunga leBay - amaqabunga ayi-15.
Amanzi abandayo - 300 ml.
Thela amahlamvu ngamanzi, ulethe ku-thumba bese ubilisa eminye imizuzu emi-5.
Kanye namaqabunga, uthele umhluzi kwi-thermos.
Bayeke basebenze amahora ama-3-4.
Ukumiliselwa okuholela kufanele kudakwe ngokuphelele usuku lonke izingxenye ezincane. Phinda inqubo yezinsuku ezimbili ezilandelayo, emva kwalokho udinga ukuthatha ikhefu lamasonto amabili, bese wenza enye inkambo.
Amanzi - ilitha eli-1.
Isinamoni Cinnamon - 1 pc.
Iqabunga leBay - izingcezu ezi-5.
Bilisa amanzi, uthele isinamoni kanye neqabunga le-bay.
Bilisa yonke into ndawonye imizuzu eyi-15.
Vumela umhluzi upholile.
Thatha i-decoction kungakapheli izinsuku ezi-3 ezingama-200 ml. Ukuphuza utshwala ngalesi sikhathi kwenqatshelwe. Le ndlela yokupheka isetshenziswa njengendlela yokunciphisa isisindo.
Izakhiwo zeqabunga le-Bay
Ukwelashwa kweqabunga le-Bay ngohlobo lwe-2 yesifo sikashukela kukuvumela wehlise ushukela wegazi, uthuthukise ukusebenza kwe-endocrine gland.
Amaqabunga e-Bay aqukethe izinto eziwusizo:
ezinye izinhlobo zokuthukuthela,
Iqabunga leBay lisetshenziselwa ekwelapheni umkhuhlane, izifo ezithinta igciwane lokuphefumula, ngoba linemiphumela yokuthambekela, yokulwa nokuvuvukala, ye-antiviral kanye ne-sedative. Kuyasiza ukuthatha imikhiqizo esekwe ngamaqabunga nge-tonsillitis, izifo ezihlangene, izifo zesikhumba.
Iqabunga le-Bay linemiphumela ethile emzimbeni:
ukucebisa ngamavithamini, amaminerali, ama-phytoncides,
kubambezela ukusetshenziswa kwama-carbohydrate,
Ukuvinjwa kokufakwa kukasawoti, kuthuthukisa ukuhamba okuhlanganayo,
uhlanza izitsha ezinobuthi
umphumela omnene we-hypoglycemic.
Ukusetshenziswa ekwelashweni kweqabunga le-bay kukuvumela ukuthi ususe amanzi amaningi nosawoti emzimbeni, uthuthukise isimo sezinwele, izinzipho, isikhumba.
Kuyasiza ukukhetha amaqabunga omisiwe. Amaqabunga e-Bay kufanele ahlanzeke, ngaphandle kwamachashazi. Uma ishidi lidilika, liqhekeka, bese lingekhwalithi embi.
Kufanele unake usuku lokukhiqiza, olukhonjisiwe kwiphakheji. Ukugcoba ngezinto eziwusizo kuqukethwe ngonyaka wokuqala womile. Ngokugcina isikhathi eside, amaqabunga athola ukunambitheka okubabayo, nezakhiwo zokuphulukisa ziyancishiswa. Ngemuva kosuku lokuphelelwa yisikhathi, awudingi ukusebenzisa amaqabunga e-bay.
Gcina ekhaya ngemuva kokuvula iphakethe esitsheni sengilazi endaweni yokushisa engeqi ama-20 degrees.
Amaresiphi wesifo sikashukela
Lapho ulungiselela isiphuzo sokwelapha, kubalulekile ukunamathela kuresiphi ngqo ukuze umkhiqizo ube nomphumela omuhle emsebenzini wezitho zangaphakathi nezinga le-glucose. Kuyasiza ukuphuza uma kwenzeka ukwehluleka ku-endocrine gland, imnene ngezigaba ezilinganiselwe zikashukela, ukumelana ne-insulin. Lapho kushiswa, iqabunga le-bay likhipha ukunambitheka okuwusizo ekuphefumuleni ushukela. Sebenzisa izinongo ekuphekeni, ngokwesibonelo, kwisobho, kusitsheni yemifino.
Uma ukusabela kwe-allergic (ukushesha, ukulunywa), ukuqunjelwa kwenzeka lapho usebenzisa iqabunga le-bay, ukuqunjelwa kufanele kuyekwe. Ukuze sinqande umphumela oyinkimbinkimbi weparsley, kubalulekile ukuphuza amanzi amsulwa futhi udle ukudla okune-fiber komoya.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, kunconywa ukukala amazinga kashukela egazini ngaphambi nangemva kokusebenzisa ngakunye kwekhambi leqabunga le-bay. Lapho wehlisela amazinga kashukela, kubalulekile ukubonana nodokotela we-endocrinologist ukuze ulungise inani kanye nomthamo wezidakamizwa. Izinsuku zokuqala ezimbalwa, phuza ukumnika ngezingxenye ezincane ukulandelela ukusabela komzimba.
Isikhathi sokwelashwa kuya ngezimpawu zomzimba ngamunye. Imvamisa isukela emavikini lamabili kuya ezinyangeni ezi-3. Ekupheleni kwenkambo yokwelashwa, phumula inyanga engu-1, ngemuva kwalokho ukwelashwa kubuye futhi. Ngaphambi kokuwusebenzisa, shisa umhluzi kancane bese uwuphuza esiswini esingenalutho.
Isilinganiso seqabunga le-Bay
Ukulungiselela i-decoction oyidingayo:
Amacembe athululelwa ngamanzi abilayo futhi avunyelwe ukuma imizuzu engama-30. Phuza ngokufakwa koshukela noma uju. I-decoction ithuthukisa umgudu wokugaya ukudla futhi inciphise umfutho wegazi, isuse umoya omubi.
Ukuzijwayeza ukusetshenziswa kwenye iresiphi yomhluzi ovela e-lavrushki. Ukulungiselela amaqabunga angama-20 abekwe esitsheni, uthele amanzi abilayo (500 ml), ubilise imizuzu engama-5-7. Bese beyithela ku-thermos enamahlamvu bese begcizelela ubusuku bonke. Ekuseni, sebenzisa izipuni ezi-3 ngaphambi kokudla ngakunye (amahlandla ama-3 ngosuku).
Sebenzisa elinye icebo lokulungiselela i-decoction. Ukuze wenze lokhu, udinga ukugcwalisa amashidi ayi-15 ngamanzi abandayo u-300 ml, ubeke ngomlilo. Umhluzi ubilisiwe imizuzu emi-5, bese ufakwa amahora ama-4. Phuza isiphuzo ngezingxenye ezincane usuku lonke izinsuku ezintathu. Okulandelayo, udinga ukuthatha ikhefu leviki le-2 futhi, uma kunesidingo, ukuqala futhi ukwelashwa.
Iqabunga le-bay (ama-8 ama-pcs) libekwa esitsheni esingenamuntu, lithululelwe ngamanzi (amalitha ama-2). Ngemuva kwalokho gqoka igesi ubilise.
Ngemuva kwalokho beka eceleni bese uvumela ukupholisa nokungenisa amasonto ama-2 endaweni ebandayo. Sebenzisa ukumnika okungu-100 ml ngosuku noshukela ongu-7 mmol / L, 200 ml noshukela ongu-20 mmol / L.
Ukuze kwenziwe uwoyela wezokwelapha, kuyadingeka:
1 inkomishi omnqumo
Amagremu ama-20 weqabunga le-bay.
Amaqabunga afafazwe abe yisimo se-powder futhi ahlanganiswe ne-oyili. Izinsuku eziyi-10, gcizelela endaweni emnyama. Hlunga ngaphambi kokusetshenziswa, gcina endaweni epholile.
Amafutha e-Laurel afakwa ekudleni noma ekuphuzeni amaconsi ayi-10 ekuseni nakusihlwa, aphuza amanzi amaningi. Akufanele unikeze ukwelashwa okufudumele kawoyela we-laurel, ungakufudumeza kuphela ngokusebenzisa okugeza komphunga. Isetshenziselwa ukusetshenziswa kwangaphandle ngamanxeba okupholisa isikhathi eside, ama-abrasion, amabhuthi. Faka isicelo endaweni ethintekile amahlandla ama-3 ngosuku.
Iqabunga le-Bay nesinamoni
Amahlamvu (ama-6 ama-pcs) nesinamoni (1 tsp) afakiwe emanzini abilayo. Imizuzu engu-15, umhluzi ubilisa ukushisa okuphansi.
Imizuzu yokuqala engama-2-3 ipani ayimboziwe ngesembozo ukuze uwoyela obalulekile othinta kabi izinso uncishiswe. Sebenzisa isiphuzo sokwelapha izinsuku ezingama-5, 100 ml lilinye. Izikhathi ezi-2 ngosuku, okungukuthi, ekuseni nakusihlwa ngamancanyana amancane. Isetshenziselwa ukuqinisa uhlelo lwezinzwa futhi yehlise isisindo ngohlobo 2 sikashukela.
I-tincture yotshwala evela kumacembe e-bay ayidliwanga ngaphakathi, ngoba utshwala bunqatshelwe sikashukela.
I-tincture isetshenziselwa ukusetshenziswa kwangaphandle. Ekwenzeni umkhiqizo, udinga ukwelula amaqabunga ageziwe ngezandla zakho, uwafake esitsheni sengilazi. Utshwala buhlanjululwa ngamanzi bese amaqabunga ethelwa.I-tincture igcinwa izinsuku eziyi-7 endaweni emnyama.